Kutholwe ikhanda lomuntu namathambo | News24
Kutholwe ikhanda lomuntu namathambo
IZITHOMBE : lethiwe makhanyaIndlu lapho kutholwe khona ikhanda lomuntu.
USASHAQEKILE umphakathi waKwaZayeka endaweni yaseSweetwaters ngemuva kokutholakala kwekhanda lomuntu kanye namathambo ngeSonto ekuseni mhla zingama-31 kuNdasa (March).
Ngokuthola kwe-Echo leli khanda litholwe izingane ezincane eduze kwendlu endala eyigebedu eseduze kwendawo eyihlathi elincane kuyona le ndawo.
Kuthiwa laba bafana kade besukela ihhashi nelibe selibaleka lingena kulendawo nokuyilapho izingane zifike zabona khona le mihlola zabe sezihlaba umkhosi.
Ngokusho kukaMnu Ntokozo Ntsikithi nozibonele ngamehlo uthe ikhanda beselingasenalutho kanti amazinyo wona abeseziqathakela amanye atholwa ngaphansi kwekhanda.
“Amathambo akhe abengaphelele ngoba akade ekhona kusolwa ukuthi awezingalo kanye nelasemqaleni okunye akuzange kutholakale.
“Wonke amalungu akhe omzimba atholiwe atholwe ngokwehlukana. Amathambo engalo eyodwa atholwe uma ungena kule ndawo, ikhanda lona litholwe phambi kwendlu kanti amanye amathambo enye ingalo atholwe bude buduzane nalapho kutholwe khona ikhanda,” kubeka yena.
Uthe bengumphakathi basathukile ngoba abazi ukuthi ubani owenze into eyisihluku kangaka. Uthe amaphoyisa azamile ukufaka izinja ukuze zizothola amanye amathambo kodwa izinja azibuyanga nalutho.
“Esinye isikipa esimnyama sowesifazane nesitholwe imina kuyona lendawo. Ngesikhathi wonke umuntu efuna nami bengikhona ngabe sengisithola endaweni eyihlathi sikhombisa nje futhi ukuthi kade sahlala ngoba besesigqitshwe nayinhlabathi singasabonakali kahle.Umphakathi usashaqekile nje ngalesi sigameko ngoba asazi noma abantu abenza lemikhuba bakhona yini kuthina emphakathini,” kubeka yena.
Amalunga omphakathi kanye nekhansela le ndawo bathi bayasola ukuthi amathambo lawa atholakele awowesifazane osekuphele isikhathi edukile kulendawo engaziwa ukuthi ulaphi.
UNks Zandile Thembelihle Mtethwa (31) ongowukaduka eMpangeni kodwa obeqashe endaweni yaseSweetwaters waduka mhla zili-14 kuZibandlela ngonyaka owedlule kodwa kuze kuba imanje ubengakaze atholakale.
UNks Mtethwa wahamba endlini lapho ayeqashe khona ekuseni eya esibhedlela esiseHilton lapho kade esebenza khona njengonogada.
Kuthiwa wabuya ntambama ethengile izimpahla zasendlini wabe esebiza ingane yakhe ukuba iyomhlangabeza ukuze izozithatha esitobhini yena wabe esehamba eyohlala nabangani bakhe kuze kube imanje akakaze atholakale.
UMnu Sbusiso Mtshali noyikhansela kule ndawo uthe baphatheke kabi ukuthi kuze kufike ekutheni umuntu agcine esetholwa esengamathambo. Uthe okubuhlungu kakhulu ukuthi sekunakho ukuthi abantu baduke kule ndawo babikwe emaphoyiseni kodwa akukho okwenzekayo kuze kube abantu bagcina batholwa sebefile.
“Ukube amaphoyisa awenza kahle umsebenzi wawo ngabe akuze kufike la. Buka manje uma kungukuthi uyena ngempela lona wesifazane owaduka sekuzoba njani manje ngoba phela udaba lwakhe lwabikwa kusanesikhathi emaphoyiseni kodwa awazange awenze umsebenzi wawo ukuthi amufune kusanesikhathi.
“Sibuhlungu kakhulu ngalezi zigameko eziloku zivele lapha endaweni yethu. Yebo ubugebengu bona bukhona kanti futhi kumele sibambisane kodwa namaphoyisa nawo kumele adlale indima yawo ukuthi asukumele izinto uma ngabe esetsheliwe ngazo ngoba akekho ozowenzela umsebenzi wawo uma wona engawenzi,” kubeka yena. Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu uSergeant Mthokozisi Ngobese usiqinisekisile isigameko wathi amaphoyisa asesiteshini iPlessislaer ayaphenya..